Vakazvipa Nemwoyo Unoda—kuGhana | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
PANE hama kana hanzvadzi dzaunoziva here dzakatamira kune imwe nyika kunodiwa vaparidzi veUmambo vakawanda? Wakambozvibvunza here kuti: ‘Chii chinovakurudzira kuti vatamire kune imwe nyika? Vanogadzirira sei kuti vaite ushumiri hwakadaro? Ndingakwanisawo here kuita ushumiri uhwu? Kuti tiwane mhinduro dzakanaka dzemibvunzo iyoyo, tinofanira kutaura nehama nehanzvadzi idzi. Saka ngatiitei izvozvo.
Chii chakaita kuti mutange kufunga nezvekuenda kunoshumira kune imwe nyika kunodiwa vaparidzi vakawanda? Amy, uyo ava nemakore ekuma35, anobva kuUnited States, anoti: “Kwemakore, ndaifunga nezvekuenda kunoshumira kune imwe nyika, asi zvaiita sekuti ndaisazombozvigona.” Chii chakachinja maonero ake? Anoti, “Muna 2004 mumwe murume nemudzimai vaiva mapiyona kuBelize vakandikoka kuti ndivashanyire uye ndimbopayona navo kwemwedzi mumwe chete. Ndakaenda uye ndakazvifarira! Papera gore, ndakatamira kuGhana kuti ndinoshumira ikoko sapiyona.”
Makore apfuura, Stephanie, uyo ava kusvitsa makore 30 uye achibva kuUnited States, akanyatsotarisa mamiriro ake ezvinhu ndokubva ati nechemumwoyo: ‘Ndine utano hwakanaka uye handina wekuriritira. Kutaura chokwadi, ndingadai ndiri kutoitira Jehovha zvakawanda kupfuura zvandiri kuita iye zvino.’ Kunyatsoongorora mamiriro ake ezvinhu kwakaita kuti aende kuGhana kuti awedzere ushumiri hwake. Filip naIda, mapiyona ane makore ekuma40 vanobva kuDenmark, vaigara vachifunga nezvekutamira kundima inodiwa vaparidzi vakawanda. Vakatsvaga nzira dzekuzadzisa chinangwa chavo. Filip anoti, “Pakamuka mukana wacho zvakaita sekuti Jehovha akatiudza kuti: ‘Ndiwo mukana wacho uyu!’” Muna 2008 vakatamira kuGhana uye vakashumira ikoko kwemakore anopfuura matatu.
Hans naBrook, murume nemudzimai vanopayona, avo vava nemakore ekuma30, vari kushumira kuUnited States. Muna 2005 vakabatsira vanhu pakaitika dutu rainzi Hurricane Katrina. Vakazonyorera kuti vaite basa rekuvaka kune dzimwe nyika asi havana kushevedzwa. Hans anoti, “Takabva tanzwa hurukuro pagungano yaitaura kuti Mambo Dhavhidhi paakanzi aisazovaka temberi akazvigamuchira, uye akachinja chinangwa chake. Pfungwa iyoyo yakatibatsira kuti tione kuti hazvina kuipa kuchinja zvinangwa zvedu zvine chekuita nekunamata.” (1 Mak. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Brook anowedzera kuti, “Jehovha aida kuti tigogodze pane rimwe suo.”
Shamwari dzavo padzakavaudza kunakidzwa kwadzaiitwa nekushumira kune dzimwe nyika, Hans naBrook vakakurudzirwa kuti vaedze kunopayona kune imwe nyika. Muna 2012 vakaenda kuGhana uye vakakwanisa kushumira ikoko kwemwedzi mina vachibatsira ungano yemutauro wemasaini. Kunyange zvazvo vaifanira kudzokera kuUnited States, kushumira kwavakaita kuGhana kwakawedzera chido chavo chekuramba vachiisa zvinhu zvine chekuita neUmambo pekutanga. Vakazobatsirawo pakuvaka hofisi yebazi reMicronesia.
KUTORA MATANHO EKUTI VAZADZISE CHINANGWA CHAVO
Makagadzirira sei kuti munoshumira kunodiwa vaparidzi vakawanda? Stephanie anoti: “Ndakatsvakurudza munyaya dzemuNharireyomurindi dzinotaura nezvekushumira kunodiwa vaparidzi vakawanda. * Ndakataurawo nevakuru vemuungano medu uye mutariri wedunhu nemudzimai wake nezvechido changu chekunoshumira kune imwe nyika. Chinonyanya kukosha ndechekuti ndaigara ndichiudza Jehovha nezvechinangwa changu.” Panguva imwe chete, Stephanie akaramba achiita kuti asava nezvinhu zvakawanda muupenyu, izvo zvakaita kuti akwanise kuchengeta mari yaaizoshandisa ari kune imwe nyika.
Hans anoti: “Tainyengetera kuna Jehovha kuti atitungamirire nekuti taida kuenda kwaaida kuti tiende. Patainyengetera, taitaurawo zuva chairo rataida kutanga kuita zvataironga.” Hans naBrook vakanyora tsamba kumapazi mana. Pavakawana mhinduro yakanaka zvikuru kubva kubazi reGhana, vakaenda ikoko vachida kunogara kwemwedzi miviri. Hans anoti, “Takanakidzwa chaizvo nekushanda neungano yacho zvekuti takazowedzera nguva yatakagara ikoko.”
George naAdria, murume nemudzimai vekuCanada vava kuda kusvitsa makore 40, vakaramba vachiyeuka kuti Jehovha anokomborera zvisarudzo zvakanaka, kwete vavariro dzakanaka chete. Saka vakatora matanho ekuti vazadzise chinangwa chavo. Vakataura nehanzvadzi yaishumira kunzvimbo inodiwa vaparidzi vakawanda muGhana uye vakaibvunza mibvunzo yakawanda. Vakanyorawo tsamba kubazi reCanada uye reGhana. Adria anoti: “Takatsvaga dzimwe nzira dzekuita kuti tisava nezvinhu zvakawanda muupenyu.” Zvisarudzo izvozvo zvakaita kuti vakwanise kutamira kuGhana muna 2004.
Matambudziko api amakasangana nawo pamakaenda kunodiwa vaparidzi, uye makaakunda sei? Dambudziko rakatanga kusangana naAmy raiva rekusuwa kumba. “Zvinhu zvese zvakanga zvakasiyana nezvandakanga ndajaira.” Chii chakamubatsira? “Kufonerwa nevemumhuri vachitaura kuonga kwavaiita ushumiri hwangu kwakandibatsira kuti ndirambe ndichiyeuka kuti nei ndakanga ndatamira kuno. Ini nevemumhuri mangu takazotanga kutaura tese tichionana pavhidhiyo. Zvaisaita sekuti vari kure nekuti taigona kuonana.” Amy anotaura kuti kushamwaridzana neimwe hanzvadzi yemunyika macho ine ruzivo rwakawanda kwakamubatsira kuti anzwisise tsika dzakasiyana-siyana. “Shamwari yangu ndiye munhu wandaibvunza pese pandaisanzwisisa zvaiitwa nevamwe vanhu. Akandibatsira kuziva zvandaifanira kuita nezvandaisafanira kuita, uye zvakandibatsira kuti ndiite ushumiri hwangu ndichifara.”
George naAdria vanotaura kuti pavakatamira kuGhana, vakanzwa sekuti vakanga vadzokera kumakore ekare. “Pane kushandisa muchina wekuwachisa, taishandisa mabhaketi. Zvaiita sekuti nguva yataimbotora pakubika yainge yava kupetwa ka10 neyatakanga tava kutora,” anodaro Adria. “Asi papera chinguva, zvinhu zvaiita sekuti zvakaoma zvakanga zvatojairika.” Brook anoti: “Pasinei nematambudziko atinosangana nawo isu mapiyona, tinorarama upenyu hunogutsa. Tikabatanidza zvinhu zvese zvinokurudzira zvatakasangana nazvo, tinova nezvakawanda zvinofadza zvekuyeuka nezvazvo.”
USHUMIRI HWACHO HUNE MUBAYIRO
Chii chinoita kuti mude kukurudzira vamwe kuti vaitewo ushumiri uhwu? Stephanie anoti: “Zvinofadza kuparidzira mundima yaunosangana nevanhu vanoda kuziva chokwadi zvekuti vanoda kudzidza newe Bhaibheri mazuva ose. Kuenda kunoshumira kunodiwa vaparidzi vakawanda ndicho chimwe chezvisarudzo zvakanakisisa zvandakaita!” Muna 2014, Stephanie akachata naAaron, uye parizvino vari kushumira pabazi reGhana.
“Zvinonakidza chaizvo,” anodaro Christine, piyona anobva kuGermany, uyo angoti pfuurei makore 30. Christine akamboshumira kuBolivia asati atamira kuGhana. Anowedzera kuti: “Nemhaka yekugara kure nevemumhuri mangu, ndinogara ndichikumbira kuti Jehovha andibatsire. Ndava kunzwa ndiri pedyo naye kupfuura kare. Ndinonyatsoona kubatana chaiko kuri pakati pevanhu vaJehovha. Ushumiri uhwu hwavandudza chaizvo upenyu hwangu.” Christine haana nguva yakareba achata naGideon, uye vari kuramba vachishumira pamwe chete muGhana.
Filip naIda vanotiudza zvavaiita pakubatsira vadzidzi veBhaibheri kuti vafambire mberi. “Taimbova nezvidzidzo zveBhaibheri 15 kana kupfuura, asi takanga tava kungoitisa 10 chete kuitira kuti tikwanise kunyatsodzidzisa vadzidzi vedu.” Zvakabatsira vadzidzi vacho here? Filip anoti: “Ndakadzidza nemumwe mukomana anonzi Michael. Aikwanisa kudzidza mazuva ose uye ainyatsogadzirira zvekuti takapedza bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? mumwedzi mumwe chete. Pashure paizvozvo, Michael akava muparidzi asina kubhabhatidzwa. Pazuva rake rekutanga muushumiri, akanditi, ‘Munogona kundibatsira here pakuitisa zvidzidzo zvangu Bhaibheri?’ Ndakamutarisa ndichishamisika. Michael akataura kuti akanga atanga zvidzidzo zveBhaibheri zvitatu uye aida kubatsirwa kuitisa zvidzidzo zvacho.” Kune vanhu vakawanda vanoda kudzidza zvekuti kunyange vadzidzi veBhaibheri vava kutodzidzisawo vamwe!
Amy anotiudza zvakaita kuti akurumidze kuona kuti panodiwa vaparidzi vakawanda. Anoti: “Tichangosvika muGhana, takaparidza mune mumwe musha uye takatsvaga matsi. Takawana vanhu 8 vaiva matsi mumusha iwoyo chete.” Iye zvino Amy akachata naEric, uye vari kushumira pamwe chete semapiyona chaiwo. Vanoshanda neungano yemutauro wemasaini kuti vabatsire vaparidzi vari matsi vanopfuura 300 uye vamwe vanofarira chokwadi vari munyika macho. Kushumira muGhana kwakaitawo kuti George naAdria vazvionere pachavo kuti kushanda semumishinari kwakaita sei. Vakafara chaizvo pavakakokwa kuti vapinde kirasi yechi126 yeChikoro cheGiriyedhi. Iye zvino vari kushumira semamishinari kuMozambique.
Zvinokurudzira kuona vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vachishanda nesimba pamwe chete nehama nehanzvadzi pabasa rekukohwa. (Joh. 4:35) Vhiki imwe neimwe, vanhu 120 paavhareji vanobhabhatidzwa muGhana. Kungofanana nevamwe 17 vari kushanda kunodiwa vaparidzi vakawanda kuGhana, vazivisi veUmambo vanosvika zviuru pasi rose vakakurudzirwa nekuda kwavanoita Jehovha kuti ‘vazvipe nemwoyo unoda.’ Vanoshumira munharaunda dzinodiwa vazivisi veUmambo vakawanda. Vashumiri ava vanoita kuti mwoyo waJehovha ufare.—Pis. 110:3; Zvir. 27:11.
^ ndima 9 Semuenzaniso, ona nyaya dzinoti, “Unganoshumira Kusina Vaparidzi voUmambo Vakawanda Here?” uye “Zvingaita Here Kuti Uyambukire kuMakedhoniya?” dziri muNharireyomurindi yaApril 15 uye yaDecember 15, 2009.
Usati watamira kune imwe nyika, zvibvunze kuti . . .
Ndichakwanisa here kuzozviriritira, uye kuriritira mhuri yangu?—1 VaT. 2:9.
Ndinokwanisa kuwana vhiza rakakodzera here?
Ndakafunga nezvemamiriro ekunze uye tsika dzeko here?
Ndakatora matanho ekuti ndichengetedze utano hwangu here?
Ndinoda here kudzidza mutauro wenyika yacho?
Ndichava ‘ruyamuro runosimbisa’ ungano here?—VaK. 4:11.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vakazvipa Nemwoyo Unoda—kuGhana
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA July 2016
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA July 2016
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA July 2016